/g,'>').replace(/"/g,'"'), data = data_escaped.replace(/([\_u1031\_u103A]*)([\_u1000-\_u1021])/g,"$1\_u200b$2").replace(/\_u1031/g,"\_u200b\_u1031"); if (data != data_escaped) $(this).replaceWith(data); }); }); လင္းဦး(စိတ္ပညာ) _ Lin Oo: ဆရာြကီး ေဒါင်းနွယ်ေဆွ၏ ဘ၀ကဗျာေကာင်းတစ်ပုဒ်
ဆရာြကီး ေဒါင်းနွယ်ေဆွ၏ ဘ၀ကဗျာေကာင်းတစ်ပုဒ်
Labels: ကဗျာများ, သိသမျှ, အြမင်များ
လင့်ခဲ့ဇရာ၊ ေရာ်ရင့်လာခဲ့ ။
ငယ်ေသွးမစို၊ ပျက်ယွင်းယိုခဲ့ ။
လွှမ်းခဲ့မျက်ေတာင်၊ ေမှးေမှးေမှာင်ခဲ့ ။
အသံသဲ့သဲ့၊ ေ၀းေ၀းခဲ့၏ ။
ရိှုက်ပါရှူြငား၊ ခါးြကီးခါးခဲ့ ။
ပန်းဖူးငံုဆင့် ၊ မလန်းပွင့်ေတာ့ ။
လိှုင်းလွန့်လွန့်ထ၊ အိုမင်းလှြပီ ။
"စားြမိန်တံုး"သာ ြဖစ်ခဲ့ပါ၏ ။
မေလှျာက်ေတာ့နိုင်၊ နွမ်းနွမ်းယိုင်ခဲ့ ။
အရိုးေပါ်တွင်၊ အေရတင်ခဲ့ ။
လွန်ခဲ့ရသို့၊ မိှုင်းမိှုင်းညို့ခဲ့ ။
ြပန်မလန်းသို့ မည်းမည်းညို့တည်း ။
ေရှးကတုန်းလို၊ ရင်မဖိုေတာ့ ။
စာနုေရးတိုင်း၊ တံု့ေနှးဆိုင်းခဲ့ ။
အသက်ရှူရပ်၊ ဆို့ဆို့ကျပ်ခဲ့ ။
ဘ၀လမ်းခွဲ၊ မျက်နှာလွှဲြက ။
ကိုင်ထားယုယ၊ ေခါင်းငိုက်ချလျက် ။
ငိုချုန်းပဲ့တင်၊ အေလာင်းြပင်၏ ။
ငါ့အနားတွင်၊ ြပံုးရွှင်ရွှင်တည့် ။
မျက်ရည်ြပည့်နှင့်၊ ေသာကဆင့်ြက ။
ေဩာ်.... ကဗျာ... ကဗျာ
သနားသူမှျ၊ မရိှြကတည့် ။
ဤကဗျာကို ဆရာြကီးေဒါင်းနွယ်ေဆွသည် ၁၉၅၉ခုနှစ်(အသက် ၂၈နှစ်အရွယ်)တွင် ေရးသားခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ ဆရာြကီး၏ အေြကာင်းကို ေရးသားရန်စဉ်းစားခဲ့ေသာ်လည်း ြမန်မာ၀ီကီတွင် ဆရာြကီး၏ အေြကာင်းကို ေရးသားေဖာ်ြပထားသည်ကို ေတွ့ရိှရ၍ ဤblog တွင် ထပ်မံမေဖာ်ြပေတာ့ပါ ။ ြမန်မာ၀ီကီတွင် ဆရာ့အေြကာင်းအား သွားေရာက်ဖတ်ရှု့နိုင်ပါသည်။ ဆရာ့အား ေလးစားစွာ ဂါ၀ရြပုလျက်။
Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on at Friday, March 20, 2009
" ဆရာကစပ်တတ်လိုက်တာေနာ် မျက်စိထဲကိုတန်းြမင်တာပဲ အေရးအသားအရမ်းေကာင်းတယ် အခုလိုကဗျာေလးကိုတင်ေပးတာ ေကျးဇူးပါ "
March 20, 2009 at 8:20:00 PM GMT+6:30
ဘ၀ဆိုတာကို တစ်ခါတည်း မျက်စိထဲြမင်ေစတဲ့ ကဗျာေကာင်းတစ်ပုဒ်ပါပဲ။။
March 20, 2009 at 8:22:00 PM GMT+6:30
း) ကဲခုလိုကဗျာေကာင်းကို တင်ေပးတဲ့တွက် ေရာ ရိပ်သာ၀င်ချင်စိတ်ေပါက်လာတဲ့ တွက်ေရာ ေကျးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့ ေကျနပ်ြပီလား
March 20, 2009 at 9:23:00 PM GMT+6:30
ဆရာက အသက်၂၈နှစ်မှာ ဒီလိုေရးခဲ့တယ်ဆိုေတာ့
March 20, 2009 at 11:55:00 PM GMT+6:30
ကဗျာရဲ့ အပိုဒ်တုိင်းလိုလိုက လူ့ဘ၀နဲ့ တစ်ထပ်တည်းပဲ...
ဆရာရဲ့ ကဗျာအေရးအသားေတွကို ေလးစားပါတယ်။
March 21, 2009 at 1:18:00 AM GMT+6:30
March 21, 2009 at 3:48:00 AM GMT+6:30
March 21, 2009 at 7:01:00 AM GMT+6:30
ကဗျာေလးကုိ ရှာေဖွတင်ြပေပးတဲ့အတွက်... ေကျးဇူးပါ....
March 21, 2009 at 9:18:00 AM GMT+6:30
Dr. Win Thein said...
ကိုလင်းဦး ဘေလာ့ကို မြကာမြကာ ေရာက်ပါတယ်.. cbox မေတွ့လို့ မေရးြဖစ်ခဲ့ဘူး..comment က တစ်ခါတစ်ခါ ၀င်ရခက်လို့ပါ.. ဆရာြကီး ေဒါင်းနွယ်ေဆွ ကဗျာကို အလွန်ေကာင်းလို့ ကူးယူထားလိုက်ပါတယ်.. ကိုလင်းဦး ဘေလာ့ဂ်က marquee code ကို အတုယူသွားပါတယ်.. ေကျးဇူးတင်ပါတယ် ကိုလင်းဦးခင်ဗျား...
March 21, 2009 at 12:19:00 PM GMT+6:30
ကိုလင်းဦး ကဗျာေလးကို ရှာေဖွေဖာ်ြပတာေကျးဇူးတင်ပါတယ် ....
March 21, 2009 at 1:37:00 PM GMT+6:30
:)..အရမ်းကို လက်ေတွ ့ကျြပီး မှန်လွန်းတဲ့ ကဗျာေလး။
ေတွးြပီး ေရးထားတာေလးေတွကို အရမ်းေလးစားရ
ပါတယ်။ ရှာေဖွြပီး ြပန်တင်ေပးထားတဲ့ ကိုလင်းဦးကို
ေကျးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့် ။ :)...ေအးချမ်းပါေစ။
March 21, 2009 at 2:10:00 PM GMT+6:30
မှျေ၀ေပးတဲ့အတွက် ေကျးဇူးလို့ မဆံုးပါဘူး။
Dr. Win Thein ေြပာသလိုပါပဲ။ comments ေပးလို့ မရခဲ့ဘူး။
June 3, 2009 at 2:40:00 PM GMT+6:30
အရှိတရားအချုိ ့ကုိ ကာရံနဲ့ေဘာင်ခတ်လုိက်ပါတယ်
ြပီးေတာ့ ကဗျာလုိ ့သတ်မှတ်လုိက်ပါတယ်
တစ်ေနရာရာမှာမဆီမဆုိင်ဆုံေတွ ့တတ်တာလည်း ရင်ခုံစရာပါပဲ
August 22, 2009 at 2:25:00 PM GMT+6:30